OPPO Reno2Series တွေကို ဗြိတိန်မှာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ရောင်းမည် – DigitalTimes
OPPO Reno2Series တွေ ဖြစ်တဲ့ Reno2, Reno2Z နဲ့ Reno2F တို့ကို သြဂုတ်လမှာ ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ သူတို့ကို ဗြိတိန်မှာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ရောင်းတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်ရှိ English National Ballet မှာ မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပမှာပါ။
The countdown is officially on! ⏰
Only 12 days until we bring you #RenoStudioEarth, our #OPPOReno2 launch event. Keep your eyes on our social channels to stay tuned!#ZoomIntoImagination
— OPPO Mobile UK (@OPPOMobileUK) October 3, 2019
ကုမ္ပဏီက မလေးရှားမှာ သူတို့ကို Tease လုပ်နေတဲ့ အတွက် မကြာခင်မှာ ကြေညာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရက်အတိအကျကို မသိရသေးပါဘူး။ လာမယ့် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ သိလာရနိုင်ပါတယ်။
OPPO Reno2Series Quad Camera creates much more possibilities no matter video or photo.
Beastorygrapher and zoom into the imagination of yours with Reno2Series where everything comes alive !
Want to know more about OPPO Reno2 Series? Stay tuned!#OPPOReno2Series pic.twitter.com/YPooQ8X4HM
— OPPO Malaysia (@OPPOMalaysia) October 2, 2019
Reno2ရဲ့ မျက်နှာပြင်ဘေးဘောင်တွေက အရမ်းကို ပါးလွှာပြီး Screen-to-body Ratio မှာ ၉၃.၁ ရာခိုင်နှုန်းတောင် ရှိပါတယ်။ Game Boost 2.0 က ဂိမ်းကစားရင် အရမ်းကို ချောမွတ်စေပါတယ်။ ကင်မရာ အပိုင်းမှာ OIS နဲ့ EIS ကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Ultra Steady Video Mode ပါလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Ultra Dark Mode ၊ အရှေ့နဲ့ အနောက်ကင်မရာတွေအတွက် Bokeh Video ထည့်ထားပါတယ်။
အပြာနဲ့ အနက်ရောင်တွေ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ရူပီး ၃၆ ၉၉၀ သတ်မှတ်ထားပြီး မြန်မာငွေ ၇၈၀ ၀၀၀ လောက် တန်ကြေးရှိပါတယ်။